Welcome to KNU - Karen National Union
The Karen National Union (KNU) isademocratic political organisation, seeking equality and self-determination, human rights, democracy and equality inaFederal Union of Burma. The KNU is the leading political organisation representing the aspirations of the Karen people. The KNU was founded in 1947. The main aim of the KNU isagenuine Federal Union based on equality and self-determination.
Chairman : General Saw Mutu Sae Poe
Vice Chairperson : P'doh Saw Kwe Htoo Win
General Secretary : Padoh Saw Tadoh Moo
General Secretary (1) : Padoh Saw Hser Pwe
General Secretary (2) : Padoh Saw Hla Tun
Founded :5February 1947
Headquarters : Klo Yaw Lay
Armed wing : KNLA, KNDO
Departments | Judiciary Dept
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, သဲစးဝဲၤကျိၤစုတီၤဖီလၥ် ကညီတၢ်ဆီၣ်ထွ� ...
Districts | Mergui Tavoy Dist
ကေအဲန်ယူ - ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဘိတ်ထားဝယ်ခရိုင်၏ ၁၉ က� ...
Headquarters | Basic Health Traing
၂၀၂၂ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ ၁၀ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖ� ...
Districts | Kler Lwee Htu Dist
၂၀၂၁ နံၣ် လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၄ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီက ...
Districts | Doo Tha Htu Dist
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်၊ သထုံခရိုင် သထုံခရိုင် ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံ� ...
ကေအဲန်ယူ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ၊ ညောင်လေးပင်ခရိုင် မုန်းမြို့� ...
Department of Interior and Religious Affairs
Department of Livestock and Fishery
Department of Alliance
၂၆-၁-၂၀၂၂ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢအဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤဝဲ ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တပယူၥ်ဃီအဃိ ကညီဒီကလုၥ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲး သုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆ ...
KNU State regarding Padoh Mahn Nyein Maung (Burmese Version) (2021-02-03)
KYO statement on Military coup (Burmese Version) (2021-02-03)
KWO statement on Military coup (2021-02-03)
KNU State regarding Padoh Mahn Nyein Maung (English Version) (2021-02-03)
KNU statement on Military Coup (Karen Version) (2021-02-02)